We Fight We Win. -- " More than Media ": မောင်အေး သတင်း
မောင်အေး သူမြေးကို ကျူရှင်လိုက်ပို့ ပြီးအပြန်မှာ ရုတ်တရက်မူးလဲကျသဖြစ့် စစ်ဆေးရုံကို
တင်လိုက်ရ တယ်လုို့ သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ မောင်အေး ဟာ စစ်တပ်မှာ ဒုတိယ
ရာထူးအကြီးဆုံး သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး တနေ ကုန်အရက်ပဲသောက်ပြီးမူးနေ သူ ဖြစ်တယ်လုို့ သိရပါတယ်။
First hand teacher is JUNTA,NE WIN
Right arm is SEIN LWIN,KHIN NYUNT
New generation is Than Shwe
For 50 years all these Military Gangsters have almost destroyed not only the country but also the MORAL of citizens.
They also committed uncountable worst criminals to citizens in Burmese History.